वर्ष २०७७: सेयर लगानीकर्ता मालामाल, नयाँ रेकर्ड बनेको यो बेला किन्ने कि बेच्ने? :: कमल नेपाल :: Setopati
वर्ष २०७७: सेयर लगानीकर्ता मालामाल, नयाँ रेकर्ड बनेको यो बेला किन्ने कि बेच्ने?
कुन बैंकका सेयरधनीले कति कमाए?
२०७७ साल सुरू हुँदा देशमा लकडाउन थियो। कोरोनाभाइरसको संक्रमण राेक्न महिनाैंसम्म गरिएको लकडाउन र त्यसपछि पनि लागू भएका विभिन्न प्रतिबन्धले २०७७ मा नेपाली अर्थतन्त्रले ठूलो धक्का ब्यहाेर्नुपर्‍यो। हाेटल, पर्यटनलगायत क्षेत्र अझै पनि कोरोनाको मारबाट तंग्रिन सकेका छैनन्।
अर्थतन्त्रका धेरै पक्षले नाेक्सानी ब्यहाेरेका बेला सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू भने यो वर्ष मालामाल भए।
२०७६ चैत ११ देखि लकडाउन भएसँगै नेपालको सेयर बजार पनि बन्द भयो। बीचमा २०७७ बैशाख ३० र ३१ गते दुई दिन बजार खुले पनि संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा निरन्तरता पाउन सकेन।
बैशाख ३१ पछि पुनः बजार बन्द रह्यो। असार १५ गते मात्रै बजार खुल्यो, सो दिन बजारको परिसूचक नेप्से १२२३ अंकमा थियो।
त्यतिबेला धेरै कम्पनीको सेयर ‘अन्डरभ्यालुड’ नै थियो। तर संक्रमण दर बढ्दै गएकाले केही सेयर लगानीकर्तामा त्रास बढेको थियो। कतिपय त बजार ‘क्र्यास’ नै हुने हो कि भन्ने डरमा थिए।
बजारलाई बुझिरहेका संस्थागत तथा अनुभवी लगानीकर्ताले भने त्यतिबेलै खरिद बढाउन थाले। त्यसैले एक वर्ष नपुग्दै बजारको परिसूचक नेप्से दोब्बर भएको छ। मंगलबार बजार बन्द हुँदा परिसूचक २७ सय अंक पार गरेको छ। मंगलबारको २७१४ अंक अहिलेसम्मकै उच्च हो।
सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले एक वर्षअघि धेरैजसो कम्पनीको मूल्य ‘अन्डरभ्यालुड’ हुँदा आकर्षण बढ्नु स्वभाविक भएको बताए।
‘त्यसमाथि ब्याजदर घटेको थियो, ब्याजमै ऋण लिएर लगानी गर्दा पनि कम्पनीको लाभांशले जित्ने अवस्था थियो’ उनले भने।
संकटका बेला सेयर बजार न्यून अंकमा झर्ने गर्छ। धेरै कम्पनीको मूल्य अन्डरभ्यालुड हुँदा पछि बढ्ने आधार बलियो हुन्छ। बढेकै बेला ठूला र अनुभवीले सेयर बिक्री बढाउन थाल्छन्। त्यसअघि भूकम्प र नाकाबन्दीले पनि लगानीकर्तालाई गतिलो पाठ सिकाइसकेको थियो।
२०७२ बैशाख १२ गते भूकम्प गयो, जतिबेला नेप्से ९४६ अंक आसपासमा थियो। बारम्बार कम्पन उत्पन्न भइरहे। सो वर्षकै असोजबाट नाकाबन्दी सुरु भयो। भूकम्प र नाकाबन्दीपछि सेयर बजार घट्नुको साटो बढ्न थाल्यो र २०७३ साउनमा नयाँ रेकर्ड १८८१ अंक कायम गर्यो।
त्यसबाट अनुभव बटुलेका सेयर लगानीकर्ता कोरोनाका बेला पनि डगमगाएनन्, बरु लगानीको सुवर्ण अवसर ठाने।कोरोनाका बेला लकडाउन गरिँदा आयात घट्न पुग्यो। यसले मुलुकमा पर्याप्त रकम थुप्रियो, ब्याजदर झनै घट्यो। ‘न्यून ब्याजमा पैसा राख्नुभन्दा सस्तो भएका बेला सेयर किन्नु नै धेरैले उपयुक्त ठाने’ अर्यालले भने ‘अर्कोतर्फ लगानीका अरु विकल्पहरु पनि देखिएका थिएनन्।’
पैसा विदेशिनबाट रोकिएपछि त्यो पैसा बजारमा आएको लगानीकर्ता बताउँछन्।
अन्डरभ्यालुड हुँदा क्रमिक रुपमा सेयरको माग बढ्दै गयो। विभिन्न देशका कोभिड भ्याक्सिनले मान्यता पाउँदै गए। भ्याक्सिनले मान्यता पाएसँगै लगानीकर्तामा त्रास पनि कम हुन थाल्यो।
नेपालमै भ्याक्सिन आउन थाल्यो। तर बैंकमा लगानीयोग्य रकम भने पर्याप्त नै थियो, यसले ब्याजदर झनै घट्दै गयो। जसले गर्दा बजारले हाल नयाँ रेकर्ड बनाएको छ।
अहिले बेच्ने बेला हो कि किन्ने ?
नयाँ रेकर्ड बनेका बेला किन्ने कि बेच्ने धेरैलाई अन्यौलता हुन्छ। बेचौं भने अझै बढ्न सक्छ भन्ने मनोभावना र किनौं भने घट्ला भन्ने मनोभावना विकास हुन्छ।
सेयर बजारमा लागेकाहरुले बजार बढेका बेला धेरै लोभ पनि गर्न नहुने र घटेका बेला निराशावादी पनि हुन नहुने सुझाव दिन्छन् अनुभवी लगानीकर्ता। तर बजारलाई प्रभाव पार्न सक्ने विषयबस्तुमा भने जानकार भइरहनुपर्छ।
हाल तरलतामा चाप परेको छ, जसले गर्दा ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिएको छ। तर सरकारले गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च बढ्ने र यसले तरलताको टड्कारो अभाव देखा नपर्ने कतिपय बैंकरको भनाइ छ।
‘सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्ने भएकाले जेठ/असारताका तरलताको समस्या नदेखिएला’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सिइओ भुवनकुमार दाहालले यसअघि सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
अझै ६–७ महिना तरलताको अभाव नहुने अनुमान छ। यसकारण ठूलो अंकमा ब्याजदर नबढ्ने अनुमान छ। जुन बजारका लागि अनुकुल नै हुनेछ।
अर्कोतर्फ बजारले उच्च अंकको रेकर्ड बनाएको छ। कतिपय कम्पनीको सेयर अहिले ‘ओभरभ्यालुड’ भएको लगानीकर्ता बताउँछन्। अब सेयर किन्नुअघि धेरै सजगता अपनाउनुपर्ने बेला आएको उनीहरुको सुझाव छ।
लगानीकर्ता पिताम्बर शर्मा खरेल भन्छन् ‘धेरै कम्पनीमा अहिले जोखिम बढेको छ, राम्ररी कम्पनीको विश्लेषण गर्न नजान्नेले हल्लाका भरमा अहिले किन्नु उपयुक्त हुँदैन।’ १–२ वर्ष लाभांश नै दिन नसक्ने कम्पनीहरुको समेत मूल्य बढेको भन्दै उनले सजग हुन आग्रह गरे।
केही वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको सेयर भने खरिद गर्न सकिने उनले बताए। ‘जसको मूल्य आम्दानी अनुपात २० भन्दा तल वा सो हाराहारीमा छ, बिजनेस ग्रोथ राम्रो छ, साना लगानीकर्ताले ती कम्पनीहरु किन्न सक्छन्’ उनले भने।
आफूलाई बजारको प्राविधक बताउने कतिपयले विगतको ट्रेन्डलाई तुलना गरेर बजार ५–६ हजारसम्म पुग्ने हल्ला गर्दै आएका छन्। त्यस्ता प्राविधिक विश्लेषकबाट सतर्क हुनुपर्ने लगानीकर्ताको सुझाव छ।
खरेलले भने ‘प्राविधिक जानकारी लिनु नराम्रो होइन, तर त्यसलाई शत प्रतिशत विश्वास गरेर अघि बढ्नु हुँदैन, बजारमा जुनसुकै बेला बियरिस ट्रेन्ड पनि आउन सक्छ वा अझै बढ्न पनि सक्छ।’
लगानीकर्ताले अहिले भएभरको सम्पूर्ण पैसा बजारमा खन्याउन नहुने, बरु नाफा भएका कम्पनी बेचेर आफूलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘केही पैसा हाल्न सकिन्छ, तर भएभरको पैसा अहिले बजारमै हाल्छु भन्नु मुर्खता हो’ उनले भने।
पैसा चाहिएको अवस्थामा र पोर्टफोलियोमा नाफा भएका कम्पनीहरु बेचेर लगानीकर्ताले अब नाफा बुक गर्न सक्ने बताउँछन् अध्यक्ष अर्याल।
‘राम्रो नाफा आएको अवस्थामा ति कम्पनीहरुको सेयर बेचेर नाफा बुक गर्न सकिन्छ, ताकि बजार घटेमा खरिद गर्नका लागि पनि पैसा होस्।’ नोक्सानमा रहेका कम्पनीहरु भने अहिले होल्ड नै गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अरु कम्पनीको मूल्यमा अहिले लगानीकर्तालाई नोक्सान नरहेको पनि खरेल दावी गर्छन्। साना र नयाँ लगानीकर्तालाई बैंकबाहेक अरु कम्पनीमा लगानी नगर्न उनको सुझाव छ।
अर्यालले पनि बैंकहरुको सेयर तुलनात्मक रुपमा कम जोखिम रहेको बताउँछन्। ‘नयाँ कम्पनीहरु थपिए, ति कम्पनीको मूल्य उच्च हुँदा नेप्सेको अंकले नयाँ रेकर्ड बनाएको हो’ उनले भने ‘धेरैजसो बैंकहरुको मूल्य अहिले न्यून नै छ।’
नागरिक स्टक डिलरलाई पनि सबै बैंकहरुको सेयर खरिदका लागि नेप्सेले अनुमति दिइसकेको छ। त्यसले पनि बैंकको मूल्य अब धेरै नघट्ने खरेलको बुझाइ छ।
तर जोखिम लिन चाहने र बजार बढेमा त्यसको लाभ पनि लिन खोज्ने हो भने सेयर किन्न सकिने खरेल बताउँछन्। ‘जोखिम लिने नै हो भने मेरो भन्नु केही छैन, बजार बढेमा त्यसको लाभ पनि उहाँहरुलाई नै हो, तर नेप्से ५–६ हजार पुग्छ भन्ने प्राविधिक टिप्पणीलाई नै विश्वास गरेर किन्नु हुँदैन भन्ने सुझाव हो’ उनले भने।
एक वर्षमा कुन कुन समूह कतिले बढे?
२०७६ चैत ९ गतेदेखि २०७७ बैशाख ३० सम्म सेयर बजार बन्द भएपछि हामीले आधार मिति गत बैशाखको ३१ गते र अन्तिम मिति चैत ३१ लाई मानेका छौं।
यस अवधिमा ब्यापार, जीवन र निर्जीवन बीमा समूहका सेयरधनीलाई उच्च लाभ मिल्यो। सो समीक्षा अवधिमा ब्यापार समूह (विशाल बजार र साल्ट ट्रेडिङ) को मूल्य ५ गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ। जीवन, निर्जीवन बीमा र होटल समूह पनि करिब ३ गुणाले बढेका छन्।
२०७७ बैशाख मसान्तको अंक
२०७७ चैत मसान्तको अंक
सेयर बजारमा सबैभन्दा मजबुत, भरपर्दो र सबै कम्पनीले लाभांश दिएको समूह हो बैंकिङ। यो समूहको वृद्धिदर तुलनात्मक रुपमा न्यून देखिन्छ। लाभांश समेत जोड्दा सबैजसो बैंकका लगानीकर्ताले दोब्बर मूल्य कमाएका छन्।
उदाहरणका रुपमा बोनस सेयर मात्रै दिएको प्राइम कमर्सियल बैंकलाई हेरौं, गत बैशाख ३१ गते १ सय कित्ता किन्दा कुल लगानी २४ हजार ५ सय रुपैयाँ हुन्छ। बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो।
अब सो लगानीकर्तासँग ११५ कित्ता हुन आउँछ। हालको बजार मूल्य ४५१ हिसाव गर्दाको मूल्य ५१ हजार ८६५ रुपैयाँ हुन आउँछ। ब्रोकर कमिसन घटाएर पनि लगानीकर्ताले दोब्बर बढी नाफा लिन सके।
उतारचढावमा समेत न्यून जोखिम हुने भएकाले साना र नयाँ लगानीकर्ता यसै समूहका कम्पनीमार्फत बजारमा प्रवेश गर्न सक्छन्।
सो समूहका कम्पनीहरुको मूल्य वृद्धि कस्तो रह्यो त?
२०७७ बैशाख ३१ को मूल्य
२०७७ चैत ३१ को मूल्य
थपिएको कुल लाभांश प्रतिशत
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ३१, २०७७, ०६:१४:००